HOME » भरतपुरः एमालेले मतपत्र च्याते के होला ?
दामोदर नेपाल , २१ श्रावण २०७४
भरतपुर। भरतपुर उपमहानगरपालिकाको वडा १९ मा मतपत्र च्यातेपछि पुनः मतदान भयो । यसको परिणाम पनि आएको छ । प्राप्त परिणामअनुसार यो वडामा माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालले फराकिलो अग्रता लिएकी छिन् । तर समग्रमा भने देवी ज्ञवालीको अग्रता कायमै छ।
यो वडामा मात्र रेणुको अग्रता ५ सय ६३ मतको छ । अघिल्लो मतदानमा यहाँको १८ सय मत गनिसक्दा रेणुले ५१ मतको अग्रता लिएकी थिइन् । अघिल्लो परिणामलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ रेणुको अग्रता १०० मतको हाराहारीमा मात्र हुने सम्भावना थियो । तर, दोस्रो मतदानले नतिजा उल्टाइदिएको छ । दोस्रो मतदानको नतिजाअनुसार यहाँ रेणुलाई ४ सय ६० भन्दा बढी मत नाफा भएको छ ।
यहाँ मतपत्र च्यातिएपछि अनेकौं तर्क र बहसहरु गरिए । तर्कहरु जेजस्तो भए पनि यहाँ मतपत्र च्यात्नाले रेणुलाई भने फाइदै भयो । घटनाक्रम र प्राप्त तथ्यहरु केलाउँदा यहाँ मतपत्र च्यात्ने काम माओवादीबाटै भएको थियो । तथ्यहरुका आधारमा जुन निहीत स्वार्थका लागि मतपत्र च्यातेको भनिएको थियो अहिलेको परिणामले त्यही अभीष्ट पूरा भएको देखाएको छ ।
यही बीचमा अर्को प्रश्न उठेको छ – एमालेले फेरि मतपत्र च्यात्यो भने के होला ? अहिलेसम्म भएका घटनाक्रम र बसालिएका नजिरहरुको आधारमा यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । पुनः मतदानकै लागि नियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएकोमा यहाँ पुनः मतदान भएपछि यो तर्कले बल पाएको छ । प्रतिस्पर्धीले मतपत्र च्यात्न सक्छन् भने हामी पनि के कम ? भनेर एमाले पनि त्यस्तै शैलीमा उत्रियो भने के होला भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ ।
हुन त अघिल्लो घटनाको प्रभावका कारण यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएकोले त्यस्तो अवाञ्छनीय घटना हुन सहज छैन । तर १९ वडामा आफूले सोचेजस्तो परिणाम नआउँदा मतपत्र च्यातिएको उदाहरणले अर्को वडा २० मा पनि आफूले हार्ने देखिए एमालेले हेरेर बस्ला त ? भन्ने तर्क पनि उठेका छन् । अहिलेसम्मको परिणामले त्यो अवस्थाप्रति शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। किनकि २० वडा माओवादीले आशा गरेको वडा हो । यहाँ माओवादीको मत बढी आउन सक्छ र अहिले मतअन्तर घटेका कारण देवी ज्ञवालीको जित हुनेमा एमाले ढुक्क बन्न सकेको छैन।
कुनै पनि तरिकाले यहाँ मतपत्र च्यातियो भने यहाँ पनि पुनः मतदानको सम्भावना बलियो छ । त्यसैले वडा नम्बर १९ को मत गणना सकिएपछि २० को गणना सुरू हुनु पूर्व थप सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले वडा १९ को विवादमाथि फैसला गर्दा जुन जुन कानुनको आधारमा निर्णय लिएको छ ती कानुन अर्को घटनामा पनि आकर्षित हुनेछन् । दोस्रो कुरा हो ‘नजिर’ । सर्वोच्चले एउटा मुद्दामा जे फैसला गरेर नजिर बसालेको छ उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा पनि उस्तै किसिमको फैसला आउने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । अदालतले आफूले बसालेको नजिरविपरित फैसला गरेका घटना कमै मात्र सुनिन्छन् । जसका आधारमा यआँ पुनः मतदानको सम्भावना हुन्छ । यी र यस्तै चर्चाहरू गणनास्थलमा व्यापक चलेका छन्, र गणनास्थलमा सतर्कता थपिएको छ।
भरतपुर १९ मा मतपत्र च्यातेपछिको समयमा खुलेर प्रचारप्रसार गर्न नपाइए पनि माओवादी कांग्रेसले भित्री रुपमा प्रचारप्रसार र मत आकर्षित गर्न ताकत खर्चेका परिणामले नै पुष्टि गरेको छ । प्रचारप्रसार र मतदाता आकर्षित गरेर नै यहाँको नतिजामा अप्रत्याशित फेरबदल भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।